June 2021 - Achawlaymyar
အမြဲတမ်းငွေမပြတ်စေတဲ့“ယတြာ”ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခရဲ့ပညာရပ်များထဲကတင်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အမြဲတမ်းငွေမပြ တ်စေတဲ့ယတြာနှင့်ဈေးဆိုင်အရောင်းဆိုင်မှာဧည့်သည်စည်ကားစေရန်ယတြာတွေ။ ငွေဖလားဒါမှမဟုတ်ကြေးဖလားတစ်လုံးထဲမှာငွေစက္ကူထဲကတန်ဖိုးအကြီးဆုံးငွေစက္ကူတစ်ရွက်ကိုဖြန့်ခင်းထားလို က်ပါကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ ငွေစက္ကူအတိုင်းအတာနဲ့တွက်ပြီးထည့်နိုင်ပါတယ်တတ်နိုင်တဲ့လူအတွက်ကတော့ တစ်သောင်းတန်ပေါ့၊ဒေါ်လာနဲ့အလုပ်လုပ်နေသူဆိုရင်တော့ဒေါ်လာထည့်ပေါ့ပြီးရင်အဲဒီငွေစက္ကူထည့်ထားတဲ့ဖလားထဲကို ရေဖြည်းဖြည်းခြင်းလောင်းထည့်ပါ။ရေစက်ခွက်ထဲကိုရေစက်ချတဲ့အခါလောင်းသလိုမျိုး လောင်းထည့်ပါ ရေလောင်းနေတဲ့အချိုန်မှာဂုဏ်တော်၉ပါးကို၉ခေါက်ပြည့်အောင်ရွတ်နေပါ၊ပြီးတာနဲ့ရေမြုပ်နေတဲ့ငွေစက္ကူပေါ်ကိုခေါင်း လောင်းတစ်လုံးတင်ထားလိုက်ပါမကြာခဏအဲဒီခေါင်းလောင်းကိုယူပြီးတီးပါ ခေါင်းလောင်းတီးနေတဲ့အချိန်မှာလည်းဂုဏ်တော် ၉ပါးကို ၉ခေါက်ပြည့်အောင်ရွတ်ပါ။အဲဒီဓါတ်ဆင်ထားတဲ့ ငွေစက္ ကူထည့်ထားသောဖလားနဲ့ခေါင်းလောင်းကိုဘုရားစင်ဒါမှမဟုတ် မြင့်မြတ်သောနေရာမှာတင်ထားပါ။ အဲဒီငွေဓါတ်ဆင်တာကိုလုပ်ရမယ့်အချိန်ကတနင်္လာနဝင်းစီးနေတဲ့အချိန်မှာလုပ်ရပါမယ်တနင်္လာနဝင်းစီးတဲ့အချိန်တွေကတော့။တနင်္ဂနွေနေ့ဆိုရင်နေ့လည်၁နာရီခွဲမှ၃နာရီအတွင်း။တနင်္လာနေ့ဆိုရင်နံနက်၉နာရီမှ၁၀နာရီခွဲအတွင်း။ အင်္ဂါနေ့ဆိုရင်ညနေ၃နာရီမှ၄နာရီခွဲအတွင်း။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဆိုရင်နံနက်၁၀နာရီခွဲမှ၁၂နာရီအတွင်း၊ကြာသပတေးနေ့ဆိုရင်နံနက်၆နာရီမှ၇နာရီခွဲအတွင်းသောကြာနေ့ဆိုရင်မွန်းလွဲ၁၂နာရီမှ၁နာရီခွဲအတွင်း။ စနေနေ့ဆိုရင်နံနက်၇နာရီခွဲမှ၉နာရီအတွင်း။တနင်္လာနဝင်းစီးတဲ့အချိန်ဟာအချို့နေ့တွေမှာဆိုရင်ညနေစောင်းနဲ့ညဦးပိုင်းတွေမှာလည်း ရှိကြပေမယ့်လည်းနေရောင်ရှိသောအချိန်များမှာသာ လုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ညနေ ၄ နာရီခွဲ ထက်ကျော်ပြီးမလုပ်သင့်ပါ၊ ဒါဆို ငွေနဲ့ လက်နဲ့မပြတ်တော့ဘူးပေါ့အားလုံးငွေမပြတ်ဝင်ပြီးအဆင်ပြေကြပါစေ။ဈေး ဆိုင်အရောင်းဆိုင်မှာ ဧည့်သည်စည်ကားစေရန် အရောင်းအဝယ်ပွင့်လန်းစေရန် ကြေးဖလား သို့မဟုတ် ငွေဖလားတွင ရေတစ်ဝက်ခန့်ထည့်၍ မေတ္တာသုတ် ၉ ခေါက်ရွတ်ပြီး မိမိဆိုင်ရှေ့မျက်နှာစာကို ဖျန်းပတ်ပါက ဧည့်သည်စည်ကား၍ အရောင်းအဝယ်များ ပွင့်လန်းလာလိမ့်မည်။ ခရက်ဒစ် Published June 29, 2021
အဆိုတော်ဖော်ကာကတော့ သီချင်းတွေကို ခံစားချက်အပြည့်နဲ့သီဆိုပြီး ပရိသတ်အားပေးမှုကို လက်ခံရရှိထားသူတစ်ယောက်ပါ။ ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်နဲ့ ရေးစပ်ထားတဲ့ သီချင်းတွေကို ကိုယ်တိုင်သီဆိုသူတစ်ယောက်လို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒီနေ့လေးမှာတော့ ဖော်ကာတို့မိသားစုက မင်းသွေးနဲ့ ရေမွန်ကို ရည်စူးပြီး သင်္ကန်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဖော်ကာဟာမင်းသွေးနဲ့လဲ ညီအစ်ကိုလိုချစ်ခင်ခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အခုပရိသတ်တွေနှမျှောတသသဖြစ်နေကြရတဲ့ ရေမွန်နဲ့လဲ SIR အဖြစ်လက်တွဲညီကာ ချစ်ခင်ရင်းနှီးခဲ့ကြတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ဖော်ကာဟာ ရေမွန် နဲ့ TWO BAND SHOW လေး လုပ်ဖို့ တိုင်ပင်ထားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Zawgyi အဆိုေတာ္ေဖာ္ကာကေတာ့ သီခ်င္းေတြကို ခံစားခ်က္အျပည့္နဲ႔သီဆိုၿပီး ပရိသတ္အားေပးမႈကို လက္ခံရရွိထားသူတစ္ေယာက္ပါ။ ကိုယ္ပိုင္ခံစားခ်က္နဲ႔ ေရးစပ္ထားတဲ့ သီခ်င္းေတြကို ကိုယ္တိုင္သီဆိုသူတစ္ေယာက္လို႔လည္း ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေန႔ေလးမွာေတာ့ ေဖာ္ကာတို႔မိသားစုက မင္းေသြးနဲ႔ ေရမြန္ကို ရည္စူးၿပီး သကၤန္းဆက္ကပ္လႉဒါန္းခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ေဖာ္ကာဟာမင္းေသြးနဲ႔လဲ ညီအစ္ကိုလိုခ်စ္ခင္ခဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး အခုပရိသတ္ေတြႏွေမွ်ာတသသျဖစ္ေနၾကရတဲ့ ေရမြန္နဲ႔လဲ SIR အျဖစ္လက္တြဲညီကာ … Read more
ဘိလပ်မြေဖျော်စက်ကို အဝတ်လျှော်စက်အနေနဲ့ အမြဲအသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားများ (ရုပ်သံ)
ဒီတစ်ခေါက်ဖော်ပြမဲ့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံက ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ထမ်းတွေကတော့ ဘိလပ်မြေဖျော်စက်ကို အခြားနေရာမှာပါ အသုံးဝင်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ် ။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားများအနေနဲ့ တစ်နေကုန် ပင်ပင်ပန်းပန်းအလုပ်လုပ်ကြရပြီး ညနေခင်းအချိန်တွေမှာ ကိုယ့်ရဲ့အဝတ်အစားတွေကိုပါ ပင်ပင်ပန်းပန်းလျှော်ဖွတ်နေကြရတာပါ ။ ဒါကြောင့်အလုပ်သမားတွေဟာ မပင်ပန်စေမဲ့နည်းလမ်းကိုရှာဖွေကြရင်း နောက်ဆုံး ဘိလပ်မြေဖျော်စက်ကို အဝတ်လျှော်စက်အနေနဲ့ အသုံးပြုဖို့ အကြံရလာခဲ့ပါတယ် ။ ဘိလပ်မြေဖျော်စက်ထဲ အဝတ်တွေပစ်ထည့်ပြီး ဆပ်ပြာမှုန့်ဖောက်ထည့်ကာ ရေပိုက်လေးနဲ့ ရေတွေကို လောင်းထည့်ပေးနေခဲ့တာပါ ။ ပင်ပန်းမှုတွေ အနည်းငယ်သက်သာလို့ ပျော်ရွှင်စွာ အဝတ်လျှော်နေကြတဲ့ အလုပ်သမားတွေရဲ့ပုံစံကို video ထဲမှာ တွေ့ရှိကြရမှာပါ ။ . . . Jasmine (Mckzone Daily) Source : rachfeed Unicode &; ဒီတစ်ခေါက်ဖော်ပြမဲ့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံက ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ထမ်းတွေကတော့ ဘိလပ်မြေဖျော်စက်ကို အခြားနေရာမှာပါ အသုံးဝင်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ် … Read more
မန္တလေး ကျုံးရေပြင်ထဲ ရေဆင်းချိုးတဲ့ စစ်ကောင်စီ တပ်သား သေဆုံး မန္တလေးမြို့ ၂၆ လမ်း ၊ ၇၈ လမ်း ကျုံးရေပြင်ထဲ ရေဆင်းချိုးတဲ့ စစ်ကောင်စီ တပ်သား ရေနစ်သေဆုံးမှု ဇွန်လ ၃၀ ရက် ညနေ ၄ နာရီလောက်က ဖြစ်ပွါးခဲ့ပါတယ်။ ရေနစ်သူဟာ အမှတ် (၂) တိုက်ပွဲဝင် စည်းရုံးရေးသင်တန်းကျောင်းမှာ တာဝန်ကျနေတဲ့ တပ်သား နိုင်လင်းကျော်ဖြစ်ပြီး နေ့လယ် ၃ နာရီခွဲ လောက်က ကျုံးဘေးမှာ အစောင့်ကျနေတဲ့ စစ်ကောင်စီ တပ်သားတွေဆီ အလည်လာရင်း ကျုံးရေပြင်ထဲ ရေဆင်းချိုးတာ ဖြစ်တယ်လို့ မှုခင်းမှတ်တမ်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေ ရှာဖွေရာ ညနေ ၆ နာရီကျော်လောက်မှာ သေဆုံးလျှက် ပြန်လည် ရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ … Read more
အရမ်းကြီး ချစ်မိသွားတဲ့အခါ သင့်ကိုယ်သင်တောင် အမိန့်ပေးလို့ မရတော့တဲ့ အရာများ
အရမ်းကြီး ချစ်မိသွားတဲ့အခါ သင့်ကိုယ်သင်တောင် အမိန့်ပေးလို့ မရတော့တဲ့ အရာများ အချစ်ဆိုတာက သိပ်ကို ဆန်းကြယ်ပါတယ်။ခံစားချက်လေး တစ်ခုဆိုပေမယ့် ရှိရှိသမျှ ခံစားချက်တွေထဲက အထူးဆန်းဆုံး အရာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ခံစားချက်တောင် ကိုယ် မပိုင်တာမျိုးကို ချစ်မိကြသူတွေသာ သိနားလည်ကြပါတယ်။တစ်ယောက်ယောက်ကို ချစ်မိတဲ့ သင့် ခံစား ချက်တွေကို ဘယ်လို လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုတောင် သင် မပြောင်းလဲနိုင်ပါဘူး။ ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်…. (၁) စိတ်ဆိုးလို့ မရဘူး ချစ်မိသွားရင်တော့ သူက ကိုယ် စိတ်ဆိုးတဲ့ အရာကို လုပ်ရင်တောင်မှ အသိစိတ်အရ စိတ်ဆိုးသင့်တဲ့အရာဆိုတာကို လက်ခံပေမယ့် ခံစား ချက်ကတော့ ဘယ်လိုမှ စိတ်မဆိုး ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ စိတ်ဆိုးသင့်တာကို သိပေမယ့် စိတ်လည်း ဆိုးချင်ပေမယ့် ဘယ်လိုမှ စိတ်ဆိုးမနေတာကတော့ အချစ်စိတ်ကြောင့်ပါပဲ။ (၂) မချစ်လို့ … Read more
ခ်ိဳ႕တဲ့ၿပီးစားဝတ္ေနေရးအခက္အခဲနဲ႔ ႀကဳံေတြေနရတဲ့ျပည္သူေတြအတြက္ ဆန္နဲ႔ဆီေတြသြားေရာက္လွဴဒါန္းေပးဦးမယ့္ ခင္သဇင္
ပရိသတ္ႀကီးေရပရိသတ္ေတြရဲ႕ အခ်စ္ေတာ္ သ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသမီးေခ်ာေလး ခင္သဇင္ကေတာ့ အလႉအတန္းေတြကိုရက္ေ ရာစြာနဲ႔လႉဒါန္းေလ့ရွိတာပရိသတ္ေတြသိရွိၿပီးသားျဖစ္မွာပါေနာ္။ ခင္သဇင္ကေတာ့လိုအပ္ေနတဲ့သူေတြအတြက္ကို အၿမဲလိုလို လႉဒါန္းေပးေနၿပီးသဒၶါတရားထက္သန္လြန္းလွတဲ့သူတစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔မွာလည္းခင္သဇင္ကသူရဲ႕လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာကေနအလႉေလးတစ္ခုထပ္မံျပဳုလပ္သြားမယ့္အေၾကာင္းကိုေပ်ာ္႐ႊင္စြာနဲ႔မွ်ေ ဝေဖာ္ျပလာခဲ့ပါတယ္။ ခင္သဇင္ကခ်ိဳ႕တဲ့ၿပီးစားဝတ္ေနေရးအခက္အခဲနဲ႔ ႀကဳံေတြေနရတဲ့ျပည္သူေတြအတြက္ဆန္နဲ႔ဆီေတြသြားေရာက္လႉဒါန္းေပးသြား ဖို႔စီစဥ္ေနၿပီးအခုလိုလႉဒါန္းရေတာ့မယ့္အတြက္ဝမ္းသာပီတိျဖစ္ကာေပ်ာ္႐ႊင္ေနေၾကာင္းကိုပါ မွ်ေဝထားခဲ့တာပါ။ သူရဲ႕အလႉေလးကိုလည္းပရိသတ္ေတြသာဓုေခၚေပးဖို႔နဲ႔အလႉေလးရဲ႕ကုသိုလ္အဖို႔ဘာဂအစုစုကို ပရိသတ္ေတြလည္း ထပ္တူရရွိၿပီးသူနဲ႔အတူ နိဗၺာန္ကို သြားနိုင္ဖို႔လည္း သာဓုေခၚဆိုၾကဖို႔ကုသိုလ္ေတြမွ်ေဝထားခဲ့ပါေသးတယ္။ ပရိသတ္ႀကီးေရခင္သဇင္ရဲ႕ လႉေနရရင္ေပ်ာ္ေနတဲ့စိတ္ထားေလးကေတာ့ ခ်ီးက်ဴးဖြယ္ေကာင္းလွပါတယ္ေနာ္။ အခ်ိန္ေပးၿပီးဖ တ္႐ႈ႕ေပးၾကေသာ ပရိတ္သတ္ႀကီးအားလုံးလည္း သာယာေသာေန႔ေလးျဖစ္ပါေစ ေက်းဇူးလည္းအထူးတင္႐ွိပါတယ္ေနာ္။ ခရက္ဒစ္ ယူနီကုဒ္ျဖင္႔ ဖတ္ရန္ ပရိသတ်ကြီးရေပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးချောလေး ခင်သဇင်ကတော့ အလှူအတန်းတွေကိုရက်ရောစွာနဲ့ လှူဒါန်းလေ့ရှိတာပရိသတ်တွေသိရှိပြီးသားဖြစ်မှာပါနော်။ ခင်သဇင်ကတော့လိုအပ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ကို အမြဲလိုလိုလှူဒါန်းပေးနေပြီး သဒ္ဓါတရားထက်သန်လွန်းလှတဲ့သူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာလည်းခင်သဇင်ကသူရဲ့လူမှု ကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေအလှူလေးတစ်ခုထပ်မံပြုုလပ်သွားမယ့်အကြောင်းကိုပျော်ရွှင်စွာနဲ့မျှဝေ ဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်။ ခင်သဇင်ကချို့တဲ့ပြီးစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲနဲ့ ကြုံတွေနေရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ဆန်နဲ့ဆီတွေသွားရောက်လှူဒါန်းပေးသွားဖို့ စီစဉ် နေပြီးအခုလိုလှူဒါန်းရတော့မယ့်အတွက်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ကာပျော်ရွှင်နေကြောင်းကိုပါ မျှဝေထားခဲ့တာပါ။ \_သူရဲ့အလှူလေးကိုလည်း ပရိသတ်တွေသာဓုခေါ်ပေးဖို့နဲ့အလှူလေးရဲ့ကုသိုလ်အဖို့ဘာဂအစုစုကို ပရိသတ်တွေလည်း ထပ်တူရရှိပြီးသူနဲ့အတူ … Read more
အချိန် မိနစ်လေးဆယ်လောက်ပေးရုံနဲ့ ဝက်ခြံအဆီဖု ကင်းမယ်
အချိန် မိနစ်လေးဆယ်လောက်ပေးရုံနဲ့ ဝက်ခြံအဆီဖု ကင်းမယ် ဝက်ခြံအဆီဖု သမားတွေ အတွက် ချွေးပေါက် ကျဉ်းတယ် အဆီပြန်တာ သက်သာတယ် အမည်းစက် မှဲ့ ခြောက်ပါးတယ် ဘာတွေလုပ်ရမလဲ သိချင်ရင် စာကို သေချာလေး အဆုံး ထိ ဖတ်ပေး နော် တနေ့ မျက်နှာကို နှစ်ကြိမ် ထက် ပို မသစ်ပါနဲ့ မနက်တကြိမ် ညတကြိမ်ဆို လုံလောက်ပါပြီ ညတိုင်း စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ Skincare ဖို့မမေ့ပါနဲ့ ခေါင်းအုံးစွပ် တပတ် တခါ လဲပါ မျက်နှာသုတ်ပဝါ တယောက်ထဲ သီးသန့်သုံးပါ တတ်နိုင်ရင် facial tissueသုံးပါ Makeup လိမ်းပြီးရင် သေချာ ဂရုစိုက် ပြန်ဖျက်ပါ Double Cleansing လုပ်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့ တပတ် … Read more
သင့်အိမ်ထဲကိုယူလာတဲ့ ပစ္စည်းတွေက သင့်အတွက်ကံဆိုးခြင်းတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာ သင်အမြဲတမ်းသတိထားသင့်ပါတယ်။ တချို့သောပစ္စည်းတွေက အိမ်ထဲကိုကံဆိုးခြင်းတွေယူလာနိုင်ပြီး အိမ်သားတွေကို သေဆုံးစေတဲ့အထိခိုက်တတ်ပါတယ်။ အခုဖော်ပြမယ့်အရာတွေက သင့်အိမ်မှာသိမ်းမထားသင့်တဲ့ ကံဆိုးစေတဲ့အရာတွေမို့လို့ ဒါတွေကို အမြန်ဆုံးရှင်းလင်းပစ်သင့်ပါတယ်။ (၁) ကျိုးပဲ့နေတဲ့နာရီနဲ့ မှန်အကွဲများ အိမ်အတွင်းမှာ ကျိုးပဲ့နေတဲ့နာရီနဲ့ အက်ရာထင်နေတဲ့မှန်၊ မှန်အကွဲတွေမထားသင့်ပါဘူး။ ဒီလိုကျိုးပဲ့ကွဲအက်နေတဲ့အရာတွေအိမ်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့အခါ သင့်ရဲ့ဘဝမှာအဆင်မပြေမှုတွေကို ပိုပြီးကြုံရတတ်ပါတယ်။ (၂) ပိုးစုန်းကြူး ပိုးစုန်းကြူးလေးတွေက ချစ်စရာလေးတွေမို့ ဖမ်းပြီးဖန်ဗူးလေးတွေထဲထည့်ထားတာမျိုး မလုပ်မိပါစေနဲ့။ ပိုးစုန်းကြူးလေးတွေကို ဖန်ဗူးထဲထည့်ပြီးအိမ်ထဲထားထားခြင်းက သင့်ကိုကံဆိုးစေနိုင်ပါတယ်။ (၃) ပန်းအခြောက်များ အိမ်ထဲမှာ အလှထားတဲ့ပန်းအိုးတွေထဲက ပန်းတွေညှိုးသွားတဲ့အခါ ချက်ချင်းပန်းအသစ်လဲပေးပါ။ ပန်းအညိုးတွေကို မလဲပစ်ဘဲထားထားခြင်းက သင်နဲ့သင့်အိမ်သားတွေဆီကံဆိုးခြင်းတွေဖြစ်လာစေပါတယ်။ (၄) အိမ်ထဲမှာထီးကိုဖွင့်ပြီးထားခြင်း မိုးရွာထဲကနေအိမ်ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါ ထီးကိုအိမ်အပြင်ဖက်မှာ၊ ဝရန်တာမှာဖွင့်ပြီးအခြောက်ခံပါ။ ထီးကိုအိမ်ထဲမှာဖွင့်ပြီးထားထားခြင်းက ကံဆိုးခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ (၅) ပျက်စီးခြင်း၊သေဆုံးခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရုပ်ပုံများ အိမ်ထဲမှာထားဖို့ပန်းချီကားတွေ၊ ရုပ်ပုံကားချပ်တွေဝယ်တဲ့အခါ ပျက်စီးခြင်း၊ သေဆုံးခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရုပ်ပုံတွေကိုမဝယ်ပါနဲ့။ … Read more